तारावहादुर कार्की, कुशल प्रशासक वाई भन्दै गए - SINDHULI SAUGAT
SINDHULI SAUGAT ARTICLES BREAKING NEWS UPDATE तारावहादुर कार्की, कुशल प्रशासक वाई भन्दै गए
तारावहादुर कार्की, कुशल प्रशासक वाई भन्दै गए
सिन्धुली सौगात डटकम प्रकाशित समय 8:13 PM
म सामाजिक मुद्धामा आधारित भएर कुद्न थालेको झण्डै :दुई दशक हुन लगेछ । दाजुको पत्रकारिता जीवन संगै जवर जस्ती समाचार लेख्न लगाउँदा क्यार्‍याङकुरुङ पारेर कापीको पानामा भरेर फ्त्तफालिदएर हिँड्थे । दाजुले राम्रो वानएर गिद्धे प्रेसवाट निष्कने जनप्रभात साप्ताहिक मा नाम सहित निष्कँदा गज्जवको पत्रकार भईयो भन्दै छाती चौडा पारे । नाक घिरौँलो जस्तो वनाए र सडकमा क्वाँक परेर हिँडे । म सडकमा हिड्दा पत्रकार भए । त्यो पनि दाजुको छत्र छायाँमा ।
म लेख्न अल्छी थिए । पछी म मानव अधिकारको कुरा गर्ने भएँ । कती गरे, गरिन त्यो पनि समिक्षाको विषय वन्ला । मलाई भने लाश पुरेका र गाडेका आफ्नै हात देख्दा, टाउको छुट्टीएको गिँड घिसारेर खाल्टोमा हालिएका दृष्टान्त आँखा अगाडी आउँदा अहिले पनि भाउन्न होला जस्तो हुन्छ ।
त्यतीवेला माओवादी युद्ध थियो । मार्छौ र मर्छौँको अवस्था थियो । त्यतीवेलाका प्रशासक डरमर्दा कुरा गर्न पनि गारै हुने । विकासे अड्डा ज्ञानेन्द्रका भारदारका ईसारामा चल्ने थिए । एउटा नागरिकको पहुँचको त कुरै नगारौँ । हामी ठुला कुरा गरेर हिँड्नेहरु (आज सोच्दा) को समेत त्यहाँ पहुँचमा वाहिरै थियो÷थिए ।
मैले यो कथा एउटा प्रशासकले थोरैमात्र इमान्दार पहल गर्न सक्दा ठुलो परिवर्तन सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने मात्र यो खोजेको हो । त्यसैका उदाहरण हुन् आइतवार मात्रै सेवा निवृत भएर गएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारा वहादुर कार्की । उनि अगाडी आउने हरेक प्रशासक विकासे अधिकारीहरु संग राजनीतिक दल या पत्रकार या नागरिकका कुनै न कुनै गुनासो हुने नै गरेको थियो । कसैका विरुद्धमा आन्दोलन भए २४ घण्टे लागेर हिँडे । कोही पत्रकारका कलमको निसानामा परे । कोही नागरिकको सेवामा भन्दा वढी केही व्यक्तीको सेवामा तल्लिन भएर गए । न तिनलाई सम्झीन्छौ । न सम्झीन योग्य नै वने । प्राय धेरै जसो सवै ।
तारा वहादुर कार्की सिन्धुलीमा स्थानिय विकास अधिकारीको रुपमा पहिलो पटक आउँदा शाहिकाल थियो । तात्कालिन समयमा जनताको कम र दरवार/दरवारियाको चाकडी वढी गर्नु पर्ने थियो । मेरो आँखा पनि त्यही थियो । तर उनि विस्तारै रतनचुराका जनाताको आवाज सुन्ने भए । तिनकन्याका जनताको अभिभावक भए । उनि दरवारियाका कम सिन्धुलीका जनताका वेसी आफ्नो मान्छे वने । कार्य कक्षमा सर्वसाधरणको पहुँच पुग्ने स्थानीय विकास अधिकारी सायद उनिनै पहिलो हुन् ।
आएको केही समयमा नै सिन्धुलीका केही ठेकेदारको गुनासो सुनिने गरेको थियो । सवै एलडिओ (स्थानीय विकास अधिकारी) आउँदा हामी संगै सोमरस खान कुदेर आउने गर्थे । तर यी सुन्नै तयार छैनन् । गुनासो यसैमा हुन्थ्यो । तर तिनै तारावहादुर कार्की संग वाशेश्वरको नाकाजोली हिँडेर जाँदा खैतामा कोदोको एक गिलास खाउँ भन्दै अर्धमुस्कान हासेर मागेको मैले आफैँले देखेँ । शहरमा फसाउलान् भन्ने सतर्कता गाउँमा आत्मिएताका लागि खाई दे कृष्णहरि जी भन्दै हाँसे उनि ।
सायद शाहीकाल नै थियो । तिनकन्याका किसान तारावहादुर कार्कीलाई भेट्न जिल्ला विकासमा आए । उनिहरुको १७ घण्टा सम्मको भारी वोकाईवाट गएको ढाडको छाल देखाउँदै भने हामी पनि गाडी चड्न पाए हुने थियो । जुनार र सुन्तला ढुवानी गर्न समस्या भयो । सदरमुकाम वाट नुन भुटुन वोक्न पनि समस्या भयो । तपाईले केही गरीदिनु प¥यो भन्दै गए । उनले हेरौँ भन्दै संक्षिप्त प्रतिकृया जनाए । शाहीकाल त्यसमा पनि दरवारले मनोनित गरेका प्रतिनिधि सितिमित थिएन त्यहाँ वजेट छुट्याउन । त्यसमा पनि महाँभारत पारी कस्को ध्यान जावस् । उनि यो काममा लागे । शाहीकालका ती मनोनित संग लामै विवाद भयो वजेट छुट्याउन । लामो कसरत पछी उनले २० लाख छुट्याएरै छाडे । त्यतीवेलाका शाही मनोनितले माईन्युटमा नोट अफ डिसेन्ट लेखे । तारावहादुरलाई वहुदलवादीको आरोप लगाए । उनि पछाडी हटेनन् । त्यो माईन्युट अहिले पनि छँदैछ ।
त्यही २० लाख वर्दान भयो । महाभारतै महाभारत ट्रयाक खोलियो । जुनार, सुन्तला, कोदो, मकै र भटमास सदरमुकाम सम्म ढुवानी हुन थाल्यो । त्यतीले पनि उनि रोकिएनन् । उनैको पहलमा ग्रामिण पुन निर्माण तथा पुर्नस्थापना (ट्रिपलआर) नामक परियोजना आयो । त्यतीवेल देशमा लोकतन्त्र वहाली भई सकेको थियो । राजनीतिक दलहरुको सर्वदलिय संंयन्त्र थियो । सवैले कि कमलाखुँज कि मरिण कित तिनपाटन लानु पर्छ भन्दै नेताहरु निरंतर लागे । उनले यसमा पनि अडान लिए । तर त्यही ट्रयाक खोलिएको महाभारत रेन्ज (जुनार क्षेत्र) जाने वाटोलाई नै खनियाखर्क कमारेभञ्ज्याङ नामाकरण गरी यो परियोजना हाले । त्यस वखत पनि निर्णय गर्न उनलाई गारो परेको थियो भन्ने भनाई जुनार क्षेत्रका अभियन्ता दिपक प्रसाद कोइरालाको छ । तारावहादुर कै कारण आउने नाती पनातीको पालामा पनि यातायातको साधन नदेख्ने किसानहरुले अहिले घरमै यातायातको साधन देखेका छन् । वर्षौ देखीको ढाकर, खकन, टोक्माको जीवनवाट मुक्ती पाए । ढाडको छाला जाने अवस्थावाट राहत पाए । आज यहीवाटो केही किलोमिटर पिच हुँदै छ । केही वर्षमा पुर्ण पिच हुन्छ ।
जुनार फल्थ्यो कुहिन्थ्यो । सिजनमा किसानले मुल्य लिनै सक्दैन थिए । वेसिजन सम्म राख्दा राम्रो भाउ आउने थियो । राख्ने काहाँ समस्या थियो । किसानहरु एउटा सित भन्डार वनाउने योजना लिएर जापानिज राजदुतावास गए । राजदुतावासवाट एक करोड आउने भयो । तर त्यतीले नपुग्ने अवस्था थियो । उनै तरावहादुर कार्कीको पहलमा झण्डै जिल्ला विकास र गाउँ विकास समितिवाट जम्मा गरिदिए । रकम त जम्मा भयो । चिस्यानका लागि चाहिलने उपकरण महँगो भन्सार मुल्यका कारण किसानहरुले ल्याउनै नसक्ने भए । गुनासो तारावहादुर कै आयो उनैको सहजीकरणमा न्युन मूल्यमा भन्सार छुट्यो र किसानहरुको जुनार सित भण्डार उभियो ।
आज जुनार क्षेत्रका गाउँ गाउँ सम्म यातायातको पहुँच विस्तार भएको छ तारा वहादुर कै कराण । ती नै तारावहादुर कार्कीले सिन्धुली जिल्ला विकास समितिमा सर्वसाधारणको पहुँच मा पु¥याए । ग्रामिण विकासमा सहभागि हुने गैर सरकारी संस्थालाई त्यस क्षेत्र तर्फ डोर्‍याए ।
त्यस्तै सिन्धुलीको पिपलभन्ज्याङ, घ्याङलेकवाट काभ्रेको कालढुँगाका जनताले पनि कहिल्यै यातायात को मुख सम्म देख्न पाउने थिएनन् । न त्यहाँका नेता नै जिल्ला सदरमुकाम सम्मको पहुँच राख्थे न त्यहाँलाई जिल्लाका नेताले नै देख्थे । केवल विकट थियो । केवल विकट मात्र । उनै तारावहादुरलाई फेरी पनि आउने दोश्रो फेजको ग्रामिण पुननिर्माण तथा पुर्नस्थापना आयोजना (ट्रिपलआर) मार्फत वाटोको खाका कोरियो । यो निर्णय गराउने क्रममा नेताहरुवाट आउने स्वार्थपुर्ण दवावलाई चिर्न उनले अमेरिका देखि जापान गएका कथा सुनाएर घण्टौँ हैरान पार्थे अनि निर्णय गराउँथे भन्दै केही नेताहरु अहिले पनि सुनाउँछन् । आज यो वाट पनि पिच हुने तरखतमा छ । नाती पुस्ताले समेत यातायात नदेख्ने क्षेत्रमा यातायात पुगेको छ । दँग छन् त्यहाँका स्थानीय ।
दोश्रो पटक फेरी तारावहादुर कार्की प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा सिन्धुली आए । खिम्ती ढल्केवर २२० के भी प्रसारण लाईन विस्तारका क्रममा मुआव्जाका कारण विवादको चरम रुपमा थियो । यो विवाद सल्टाउन अघिल्ला प्रशासकले पनि पहल गरे तर सकेनन् । उनैको पालामा यो सम्भव भयो । जिल्ला प्रशासनवाट सम्पादन हुने कामलाई साँच्चै छिटो छरितो वनाए । सिडियो भेट्न डराउने सर्वसाधरण संग वसेर घण्टौ गफिने र समस्या समाधानमा आफै तल्लिन हुने । फोनवाटै आएको गुनासोमा समेत तत्काल समन्यय गरेर समाधान गर्ने स्वभावका कारण उनि लाभ ग्राहीका लागि सजिलो सिडियो वने । स्थानीय निकायको चुनावमा प्राय प्रशासक कुनैन कुनै विवादमा नपरेको रेकर्ड पाउनै मुस्किल थियो । तर उनले कुसलता पुर्वक सफल गरे ।
कसै प्रति नराम्रा व्यवहार गरेनन् । कही सेवाग्राहीले पाउनु पर्ने सुविधा समयमा नपाएको गुनासो आएमा उनि तत्काल खोजीनितिमा लागिहाल्थे र समस्याको समाधान खोजिहाल्थे । उनि एक प्रशासक भन्दा पनि सच्चा सहजकर्ता थिए । इमान्दार राष्ट्र सेवक थिए । उनले सिन्धुलीमा रहँदा एउटा ईमान्दारिता देखाए संदै जनाताकै निम्ती काम गरे । यही इमान्दार राष्ट्र सेवक २९ वर्ष २ महिना ४ दिनको सरकारी सेवाको अन्तिम दिन २०७४ साल भाद्र २५ गते सम्म काम गरेर आफ्नो घर तर्फ कार्य कक्षवाटै विदा भए । तर उनलाई हरेक वर्ष उत्कृट निजामती पुरस्कार दिने सरकारले उलाई कहिल्यै सम्झीएन । उनको यस्मा गुनासो थियो या थिएन यो विषयमा उनले कुनै विषय उठान गरेनन् । फोन गरी हेरेँ ५ वजेको थियो । सिन्धुलीको सिमाना क्रस गरेँ । वाई हैँ कृष्णहरि जी भने । म तारावाहादुर कार्की संग न नजिक वने न टाडा । व्यक्तीगत लेनदेन थिएन । अफिसियल काममा जाँदा एउटा सर्वसाधरण र म उस्तै थियौँ उनका लागि ।
सोचे धेरै प्रशासक आए गए । कोही राम्रा आए कोही नराम्रा । कोही कोही जनपक्षिय देखाउँथे तर काम गर्दैन थिए । तारावहादुर मैले स्थानीय विकास अधिरकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा साँडे चार वर्ष विताए । विस्तारै वोल्ने यी इमान्दार तारावहादुर कार्कीले अन्तिम विदाईमा नेपालमा कर्मचारी तन्त्रमा भुमिगत व्यवहारले धेरै काम गर्छ (घुस खाने) । मैले गरेँ गरिन तपाईहरुलेनै समिक्षा गर्नुस् । भन्दै विदा भए ।
वहाल हुँदै लेखेको भए । दलाली गर्‍यो भन्थे होलान उनि रिटायर्ड भए । मैले लेखेँ । खास एउटा निजामती मात्र पनि ईमान्दार हुने भए । यो देश कस्तो भई सक्थ्यो होला ? भन्दै मन मनै पश्न गरी रहेँ ।
#ARTICLES #BREAKING #NEWS UPDATE
प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन कार्...
सिन्धुली उद्योग बाणिज्य संघको सूचना
नेपाल टेलिकम सिन्धुलीको सूचना !
एक ढिक्का भएर संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारी थाल्...
सिन्धुली काठमाडौँको नयाँ भाडा दर लागु हुने
सिन्धुलीमा खेल मैदानलाई थप व्यवस्थित बनाईने
कव्जा नभएको बुथबाट कस्तो परिणाम आउँदो रहेछः प्रचण्...
स्थानिय निकायमा शिक्षक संघको कार्यसमिती गठन